မကောင်းသော Infographics သည်သင်၏စျေးကွက်ကိုဖျက်ဆီးနေသလား။ #BWELA | Martech Zone
မကောင်းသော Infographics သည်သင်၏စျေးကွက်ကိုဖျက်ဆီးနေသလား။ #BWELA
ကြာသပတေးနေ့, နိုဝင်ဘာလ 3, 2011 တနင်္ဂနွေ, စက်တင်ဘာလ 30, 2012 Douglas Karr
တွမ် Webster ရဲ့ ယနေ့နံနက် BlogWorld Expo ၌အဓိကကျသောအချက်မှာအလွန်ကောင်းသည်။ သို့သော်ကျွန်ုပ်တို့ပါဝင်သောအကြောင်းအရာများသည်အရှိန်အဟုန်ဖြင့်ကြီးထွားလာသည်။ တွမ်သည်စာရင်းအင်းပညာရှင်ဖြစ်ပြီးသူ၏ယာဉ်ကိုအထူးအလေးအနက်ထားသည်။ ထို့ကြောင့်ဝက်ဘ်ပေါ်တွင်အချက်အလက်မပြည့်စုံမှုများအပေါ်မှားယွင်းသောယူဆချက်များကိုတွန်းထုတ်နေသောအင်တာနက်ပေါ်မှသတင်းအချက်အလက်များကိုသူမြင်သောအခါသူက၎င်းတို့အားရည်ညွှန်းသည်။ မင်္ဂလာပါ.
တွမ်၏ပြissueနာမှာ infographics ပို့ရန်အသုံးပြုခြင်းဖြစ်သည် အကြောင်းအရာ နှင့်ရှေးရှေးသူတို့ကိုအတင်းအကျပ် - တစ်ခါတစ်ရံနောက်ဆုံးနေ့အပေါ်။ Tom သည်၎င်းတို့အဓိကရည်ရွယ်ချက်များအတွက်အသုံးပြုသည်ကိုမယုံပါ - အချက်အလက်များကိုဂရပ်ဖစ်ပုံစံဖြင့်ဖြန့်ကျက်ရန်လွယ်ကူစွာဖြန့်ဝေသည်။ (မှတ်ချက်။ ။ မှတ်စုထဲမှာမှတ်စုတွေအများကြီးမရေးခဲ့ဘူး၊ ဒါကြောင့်ဒီနေရာမှာကျွန်တော့်ရဲ့စာမူဟာသူ့သတင်းစကားကိုသဟဇာတဖြစ်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်) ။
တွမ်တင်ပြခဲ့သည့်ဥပမာတစ်ခုမှာအောက်တွင်ဖော်ပြထားသောအချက်အလက်များဖြစ်သည်။ ထိုတွင်အနုပညာရှင်သည်အရွယ်အစားကိုပြောင်းလဲရန်လွတ်လပ်ခွင့်ကိုယူခဲ့သည်။ ထို့အပြင်အခြားပြောင်းလဲမှုများစွာလည်းပါ ၀ င်သည်။
အချက်အလက်များ၏အရည်အသွေး၊ အတိမ်အနက်၊ အကြောင်းတရားနှင့်ဆက်စပ်မှုနှင့်ရုပ်ပုံများပါသည့်ရုပ်ပုံများနှင့် ပတ်သက်၍ တွမ်နှင့်ကျွန်ုပ်လုံးဝသဘောမတူပါ။ ဒါပေမယ့်အကြောင်းအရာပံ့ပိုးပေးသူတွေကဒီအချက်အလက်တွေကိုထုတ်ပစ်လိုက်တဲ့အခါမှာဒါကတစ်နည်းနည်းနဲ့မကောင်းတဲ့ ၀ န်ဆောင်မှုတစ်ခုလို့ငါစိတ်မကောင်းပါဘူး။ အပေါ်ဒေတာကိုထောက်ပံ့ပေးကြောင်းတစ်ခု infographic လူမှုမီဒီယာအချိန်ကိုက် ဘယ်တော့မှမမြင်ရဘူးလား Hogwash ။
လူမှုမီဒီယာအချိန်ကိုက်မှုဆိုင်ရာသတင်းအချက်အလက်တစ်ခုကသင်၏ tweets များအချိန်ကိုက်ခြင်းကိုသတိပြုမိစေသည် တတျနိုငျသ ဆိုရှယ်မီဒီယာတွင်ပါ ၀ င်မှုအဆင့်ကိုသက်ရောက်နိုင်သည် (သို့) သင်ရောက်ရှိနေသည့်ပရိသတ်ကိုအမြင့်ဆုံးဖြစ်စေနိုင်သည်။ ကျနော့်အမြင်တွင်လျှင် အမိုက်စား အင်ဖိုဂရပ်ဖစ်များ ထို့နောက်ကျွန်တော်တို့ကိုတစ် ဦး disservice လုပ်နေတာ analytics applications များစင်ကြယ်သောမကောင်းသောအဖြစ်ရပါမည်။ အတွက်ထောက်ပံ့ဒေတာအားလုံး analytics သင်၏အွန်လိုင်းစျေးကွက်ရှာဖွေမှုစွမ်းဆောင်ရည်ကိုတိုးတက်စေရန်အခွင့်အလမ်းများရှာဖွေရန်စိစစ်ရန်နှင့်ပိုမိုနက်ရှိုင်းစွာတူးရန်လိုအပ်သည်။
infographics အဖြေတွေကိုပေးတဲ့နေရာမှာအရမ်းတော်ပါတယ် infographics သင်ယူဖို့အဘို့ကြီးသောဖြစ်ကြသည် ပိုကောင်းတဲ့မေးခွန်းတွေမေးပါ
ငါမကောင်းတဲ့ infographic အမှန်တကယ်ဖြစ်မည်ဟုငါပြောဝံ့ ပိုမိုအကျိုးဖြစ်ထွန်းသော ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒါကဒီမေးခွန်းတွေနဲ့စကားဝိုင်းတွေပေါ်ပေါက်လာအောင်လုပ်ပေးလို့ပဲ။ အကြှနျုပျ၏နောက်ဆုံးဘလော့ဂ်ကတကယ်တော့ဒီအထဲက ... ဘယ်မှာတစ်ခုသတင်းအချက်အလက်ထောက်ပြသည် တီဗွီကိုသတ်ဖြတ်သည့် Youtube မေးခွန်းထုတ်ခဲ့သည်။
ကျွန်ုပ်၏နောက်လိုက်များသည်တွမ်ထင်သည်ထက် ပို၍ ရှုပ်ထွေးသည်ဟုကျွန်ုပ်သံသယရှိသည်။ ငါတို့ကစာရင်းအင်းပညာရှင်မဟုတ်ဘူး။ ဒါပေမယ့်ငါတို့ကအချက်အလက်တွေအားလုံးကိုအချက်အလက်အဖြစ်ယူတာမဟုတ်ဘူး။ တွမ်ကထုတ်လုပ်သူများကလိုအပ်သည်ကိုဖော်ပြခဲ့သည် သူတို့အိမ်စာလုပ်ပါ နှင့်အခြားသူများအပေါ်မှီခိုထက်အရည်အသွေးပြည့် infographics ထုတ်လုပ်ရန်။ ကျွန်တော်သဘောမတူပါ။ မကောင်းသော infographics များကိုဖြန့်ဝေခြင်းနှင့်ဆွေးနွေးခြင်းသည်တန်ဖိုးရှိသည်ဟုသူတို့ယုံကြည်သည်။
အကြောင်းအရာသည်ထုတ်လုပ်သူများမဟုတ်ပါ၊ ၎င်းတို့သည်အိမ်စာကိုလုပ်ရန်စျေးကွက်သို့တင်သည်။ Infographics သည်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးနည်းဗျူဟာများကိုမသတ်ဖြတ်ပါ။
Douglas Karr Thursday, November 3, 2011 Sunday, September 30, 2012
Youtube က Killing TV လား။
VaultPress သည် WordPress ကိုလုံခြုံစေသည်
နိုဝင်ဘာလ4ရက် 2011 ခုနှစ် ညနေ 2:41 နာရီ
ကျွန်ုပ်၏ session ကိုတက်ရောက်သည့်အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါသည်၊ Douglas - ကျွန်ုပ်၏ဟောပြောချက်ပြီးနောက် သင့်မေးခွန်းအတွက်။ မင်းရဲ့ပရိသတ်တွေရဲ့ ဆန်းပြားမှုကို ငါသေချာပေါက် လျှော့မတွက်ပါဘူး။ Infographics များသည် အံ့သြဖွယ်ကောင်းပြီး မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည် - Florence Nightingale တွင် ကျွန်ုပ်အသုံးပြုခဲ့သည့်5မိနစ်က ၎င်းအား ထုတ်ဖော်ပြသခဲ့သည် - သို့သော် လူသားများသည် ယခုအချိန်တွင် ပျံ့နှံ့နေသည့် ဆိုးရွားသော infographics များဖြစ်သည်။ စကားစမြည်ကို စတင်ရတာကို ဝမ်းမြောက်မိပါတယ် – သင် ဆက်လက်လုပ်ဆောင်နေတာကြောင့် ဝမ်းသာပါတယ်။
နိုဝင်ဘာလ4ရက် 2011 ခုနှစ် ညနေ 3:13 နာရီ
ကျေးဇူးတင်ပါတယ် Tom! ဒါဟာ ကောင်းမွန်တဲ့ ဟောပြောချက်တစ်ခုဖြစ်ပြီး… အဲဒါကြောင့် မကောင်းတဲ့ infographics တွေကို ဝေဖန်ရာမှာ ပိုပြီးတော့ သတ္တိရှိပါလိမ့်မယ်။ ထို့အပြင်၊ ၎င်းတို့ကို ဒုက္ခဖြစ်စေနိုင်သည့် နိဂုံးချုပ်သည့်အခါတွင် ကျွန်ုပ်၏ ပရိသတ်ကို သေချာစွာ သတိပေးပါမည်။
8:2011 pm မှာနိုဝင်ဘာ 10, 53
ယခုတွင် စျေးကွက်ရှာဖွေသူများသည် အင်ဖိုဂရပ်ဖစ်များ၏ “link bait” အခွင့်အလမ်းများကို ဖမ်းစားထားသောကြောင့် အသစ်တစ်ခုကို မတွေ့မြင်ဘဲ တစ်ရက်သွားနေပုံရသည်။ အချို့က ကြီးမြတ်ပြီး အချို့က ကြောက်မက်ဖွယ်ကောင်းသည်။ အရည်အသွေးကောင်းမဟုတ်ပါက မည်သည့်အကြောင်းအရာ (Infographics များအပါအဝင်) ကိုမဆို ဖန်တီးရာတွင် အနှောင့်အယှက်မဖြစ်ပါစေနှင့်ဟု ကျွန်ုပ်ယုံကြည်ပါသည်။